Wararka Maanta: Khamiis, Dec 5 , 2013-FOWZIYO: “Dib u kabashada dhaqaalaha Somalia ayaa keeni kara xasillooni iyo baabi’inta Kooxaha Argagaxisada ah” (SAWIRRO)
Arrimaha ay wasiiraddu kala hadashay, Steve Gentili waxaa ka mid ahaa dib u habeynta maaliyadda Soomaaliya, fursadaha ganacsiga jira oo Faransiisku ka faa’iideysan karo iyo hindise sharciyeedyada socda ee Soomaaliya loogu hagaajinayo maalgashiga, ganacsiga iyo dhaqaalaha.
“Dar-dar-gelinta soo kabashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Somalia waxay sii xoojinayaan ciribtirka kooxaha xag-jirka ah ee Soomaaliya,” ayay Fowziyo ka sheegtay kulanka ay la qaadatay Mr. Gentili.
Wasiiradda oo sii hadlaysay ayaa tiri: “Waxaan ku dhiiri-gelinayaa caalamka gaar ahaan maal-gashadayaasha in Soomaaliya ay maanta ka jirto fursad weyn oo dhinaca ganacsiga ah maadaama ay kasoo kabanayso colaadihii soo maray. Dadka Soomaaliyeed waa kuwa aad ugu dhuu-daloola ganacsiga oo muddadii koobnayd ee nabaddu jirtana ay ka muuqato dalka sida ganacsigii ugu soo laabtay. Sidaas daraadeed ganacsatada caalamka iyo shiradaha dunida waxaan u sheegaynaa inay fursadaas ka faa’iideystaan.”
Fowziya ayaa kaga qaybgalaysa magaalada Paris shirka madaxda Afrika ee looga hadlayo amniga nabadeynta, dhaqaalaha, maal-gashiga, xiriirka Afrika iyo Faransiiska iyo arrimaha deegaanka.
Shirkan oo si rasmi ah berri u furmi doona ayaa waxaa lagu wadaa in la isku raaco in dalalka Afrika ay sameystaan gole guud oo caalami ah oo Qaaradda ay uga hadasho arrimaha amniga iyo nabadynta.